Usheeda daloolin durugsan Juquraafiyeed waxay leedahay waxqabad heer sare ah, oo loo adeegsado garbaha kaliya ee lagu xiro ama daab laba jibaaran. Waxay korsataa bir gaar ahaaneed iyo juquraafiyeed iyo habka alxanka sare.
Adapters Shank waa inay ku habboon yihiin dhammaan noocyada Mashiinnada Qodista, Pneumatic iyo Hydraulic labadaba. Hawsha adabtarada shanka ahi waa inay u gudbiso xawliga wareegga, quudinta quudinta, tamarta saamaynta iyo dhexdhexaadka ku shubista xarigga daloolka.
Gimarpol 's Tapered Drill Rod oo leh qayb cagck laba-geesood leh si loo siiyo ka faa'iideysiga duurka wareegga chuck. Badanaa waxay leedahay dabool been abuur ah si loo ilaaliyo booska wajiga shanqadha ee ku habboon dhagaxa dhagaxa, iyo xoogaa daloolin dhafan oo dhamaadka ah.
Waxaan badanaa aaminsanahay in dabeecadda qofka ay go'aamiso alaabooyinka 'tayo sare leh, faahfaahinta ayaa go'aamisa alaabada' heer sare ah, iyadoo leh ruuxa shaqaalaha runta ah, wax ku oolka ah iyo hal-abuurnimo ee qiimaha la soo xigtay ee loogu talagalay Shiinaha Biibiile Ceramic Lain, Waxaan soo dhawaynaynaa rajada dhammaan erayga si aad noogu soo wacdid mustaqbal la filayo. isdhexgalka ganacsiga yaryar. Alaabtayada iyo xalkayagu waa kuwa ugu fiican. Marka La Xullo, Ku Haboon Weligiis!
Dhagaxtuur dhagax gacmeed lagu qabto
Hadda waxaan haynaa qalab ka sarreeya. Xalalkayagu waxaa loo dhoofiyaa Maraykankaaga, Boqortooyada Midowday iyo wixii la mid ah, kuna raaxeysanaya magac heer sare ah oo u dhexeeya macaamiisha Shiinaha Bixiyaha Dahabka ee Shiinaha Macdanta Yt28 Yt29A Air Hammer Rock Drill, Ku soo dhawow baaritaankaaga, adeegga ugu wax ku oolka badan waxaa suuragal ah in lagu bixiyo qalbi buuxa.
Waxaan aaminsanahay: Hal-abuurnimadu waa nafteena iyo ruuxeena. Tayadu waa nolosheena. Baahi Dukaan waa Ilaaheena 2019 qiimaha jumlada Shiinaha Badhanka Button Badhanka Macdanta, Waxaan u heellan nahay inaan siino teknoolojiyad isdaahirin oo xirfad leh iyo fursado adiga kuu gaar ah! 2019 qiimaha jumlada Shiinaha Drill Rig Drill Bit, Button Bit, Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan la shaqeyno macaamiisha adduunka oo dhan, haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho macluumaad dheeraad ah, fadlan si naxariis leh nala soo xiriir, waxaan sugeynay inaan dhisno g .. .
Ma waxaad raadineysaa aaladda ugu habboon dhammaan howlaha qodista gacanta? Dhoolatusyada dhagaxa ee Gimarpol ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Waxay bixiyaan nashqad qaabeysan, adeegsiga hawada oo hooseeya waana sahlan tahay in la maareeyo. Astaamahaas awgood, waxaad ku kalsoonaan kartaa waxqabad sare, xoog iyo kharashyo dayactir oo hooseeya.